DAAWO: Madaxweyne Farmaajo oo caqabad adag kala kulmaya Beelaha Galmudug & Hardan culus oo ka taagan.
September 17, 2019 NEWS 0
DHUUSA(P_TIMES) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta kulamo gaar-gar ah la leh odayaasha dhaqanka ee beelaha ku midoobay Galmudug oo ay ka wada hadlayaan tabashada beeluhu ay qabaan ee hanaanka soo qeybsiga Mudanayaasha baarlamaanka, waana caqabadaha ugu waa weyn ee hadda hortaagan damaca dawladda Soomaaliya ee Galmudug.
Odayaashu waxay doonayaan in ay iyagu yeeshaan doorka soo xulida xildhibaanadooda oo ay faragalinta ka dayso dawladda Faderaalka Soomaaliya, waxaana aad ugu wareegsan walaac fara badan oo ah in ay dhinacyadan saameyntooda aad u xoogan tahay.
Beesha Habargidir waxay doonaysaa in ay duub-duub u soo xushaan xubnahooda oo loo madax banaaneeyo, waxaana arrimahan horkacaya Guddigii beeshaas ee dhawaan lagu dhisay magaalada Hobyo, laakiin dawladdu talaabadaas waxay u aragtaa mid halis ku doonisteeda.
Mucaaradku waxay aad u doonayaan in ay beeluhu yeeshaan habka soo xulida oo ay si gaar ah saameyn culus ugu yeeshaan xaggaas, taasna waa shabakad kale oo aan yareyn ayna dhici karto in ugu dambeynta xal rasmi ah looga gudbo.
Laakiin arrimaha xiisaha leh ayaa ah sida Madaxweyne Farmaajo u maareyn doono beesha uu ka soo jeedo oo leh 16 Xildhibaan oo aan isku dhinac u socon, waana arrimaha waa weyn ee gudaha beeshiisa hadda ka haysta,iyadoo la og yahay in labada beelood ee Madaxweynaha iyo Raysalwasaaruhu aysan ku jirin tartanka doorashada Madaxweyne-nimada, haddana caqabadaha haysta ayay qeyb ka tahay arrintan.
Ma sahlana Arrimaha Galmudug, laakiin dawladda Faderaalka ayay dadka taageersan sifeynayaan in ay suuragal tahay in ay si fudud looga gudbo, oo aysan meesha ka bixin faragalinteeda, haddana ay hoos udhigto ugu yaraan si xalwaara looga gaaro caqabadaha taagan.
Puntland oo ka tacsiyeysay geeridii Cabditahliil
Dowladda oo ka tacsiyeysay geeridii Cabditahliil
Fanaan Soomaaliyeed oo caan ah oo Muqdisho ku dhintay
Soomaali lagu maxkamadaynayo Talyaaniga
Madaxweyne Trump oo u mahad celiyey Iran